कांग्रेस कार्यालयमा सभापति देउवा विरुद्ध प्रदर्शन | जनधाराडेली
११ चैत्र २०७८, शुक्रबार १४:३५ जनधाराLeaveaComment
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शन भएको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा परिसरमा सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी भएको हो ।
नेविसंघ र नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष मनोनयनको बिषयलाई लिएर डा. शेखर कोइराला समूह निकटका विद्यार्थीहरुले नाराबाजी गरेका हुन् । सभापति देउवा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी हुन सानेपा जाँदै गरेको बेला पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्ने सडक छेउमा बसेका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
नेविसंघ र नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष मनोनयनलाई लिएर डा. शेखर कोइराला समूह निकट विद्यार्थीहरुले नाराबाजी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी हुन सानेपा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यही बेला पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्ने सडक छेउमा बसेका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
२ भाद्र २०७६, सोमबार १९:२५
उपमहानगरलाई राजनीतिको अखाडा बन्न नदिने महतोको प्रतिवद्धता
२१ बैशाख २०७९, बुधबार २०:१४
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने व्यवस्था संसदीय समितिबाट पारित
७ असार २०७७, आईतवार १९:०८